10 Waxyaabo 8 Saacadood oo CES ah 2017 Waxay I Baray Tech Tech | Martech Zone
10 Waxyaabo 8 Saacadood oo CES ah 2017 Waxay I Baray Tech Tech
Jimco, Janaayo 13, 2017 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 John Koetsier
Sida doqon, waxaan ku biiray 165,000 kale oo farsamo-yaqaanno farsamo-yaqaanno ah, suuqgeyaal, saamileyaal, hucksters, iyo kuwo kale oo kala duwan CES 2017 usbuucii hore.
Baabuurkani wuxuu leeyahay beer ku taal dash
Waqtigayga intiisa badan waxaan ku qaatay la kulanka dadka. Ama, si sax ah, in Lyfts, Ubers, iyo cabs dhiirrigelinaya taraafikada Vegas naarta markaan u socdo dadka. Laakiin waxaan u keydiyey sideed saacadood wax qof kasta oo jecel tikniyoolajiyadu uu sameeyo ugu yaraan hal mar: oo aan ku wareegaayo dabaqa hoolalka shirarka ee ugu weyn CES, Show Consumer Electronics Show.
Maxaad aragtaa? Berito waad arkaysaa.
Ama, halkii, himilooyinkii berrito ee dhici kara ama dhici kara inay rumoobaan.
Kuwo badan baa rajaynaya inaanay ahayn, sida feeryahannada shucaaca-caddeynta u ah ragga, jooniska yaryar ee dumarka da'da yar ee kulul ee u gilgiliya inay u sheegaan jidka Khariidadaha Google ay rabaan inay u maraan, ama mid ka mid ah shan aalado "smart" ah oo kala duwan oo doonaya inay noqdaan kuwaaga casriga ah saaxiib, burburin, ama beddelaad kale oo muhiim ah, gaar ahaan haddii aad tahay Jabaaniis, dhalinyaro, iyo lab.
Laakiin socodka dhulka ayaa si aad ah iigu caddeeyay inay jiraan ugu yaraan 10 mawduucyo waaweyn oo dhex galaya shirkadaha tiknoolajiyadda macaamiisha.
Halkan waa iyaga, iyaga oo aan amar gaar ah lahayn.
1: Waxyaalaha xayawaanka ah
Tan ka garan maayo khibrad shaqsiyadeed, laakiin sida muuqata runtii, runtii waanu jecel nahay xayawaannadayada. Iyo, runtii waxaan dooneynaa inaannaan ka agdhowaan iyaga.
Marka waxaan u baahanahay tiknoolajiyad qaali ah oo noo oggolaaneysa inaan xayawaankeenna fog ku quudinno barnaamijyada moobilada casriga ah. Oo waxaan u baahanahay inaan awood u leenahay inaan kula sheekeysanno fiidiyow iyaga si ay u ogaadaan inaan jecel nahay iyaga, gurigana goor dhow ayaan guriga lahaan doonaa
Ama ugu yaraan marka quudiyaha tooska ah ee xayawaanku u dhammaado Kibbleyaasha & Waxoogaa yar.
2: Qufulka guriga oo caqli badan
Munaasabadii pre-CES “Pepcom” ee ay soo bandhigayaasha bixiya inbadan ay ku tuman karaan alaabadooda si ay u cadaadiyaan waxyaabaha xunxun ee ay ku soo jiitaan cunnooyinka bilaashka ah iyo dhalinyarada, haweenka soo jiidashada leh ee dharka dhiirrigeliyaha kuleejka ah (Adigu kuma lihi adigu), ma arag wax aan ka yarayn shan, laakiin laga yaabee lix, ama laga yaabee xitaa sideed shirkadood oo leh qufullo caqli badan.
Kani waa smartwatch oo aan umuuqanin smartwatch…
Ma hubi karo tirada rasmiga ah sababtuna tahay qaddarka Corona bilaashka ah ee qabanqaabiyayaashu qasab cunaha kaga shubteen.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, furayaashu waxay qarka u saaran yihiin dabargoyn, suurta gal, taas oo ah mid weyn maxaa yeelay awoodu marna kama baxdo beeshayda. Laakiin waxaan awood u siin doonnaa shisheeyaha furayaasha kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka lagu xakameeyo oo leh kontorool marin-u-helitaan waqti-xadidan ah oo lagu nadiifiyo guryaheena, alaabooyinka iyo adeegyada la dhigo, iyo qori lagu dhex haysto agteenna.
3: kuraasta duugista
Saxafiyiinta waxay yaqaanaan wax walba oo ku saabsan kuraasta duugista ee CES. Markan, waxa aan tagay subaxa hore, kahor intaan dadka waalan xitaa loo oggolaan iridda qasriga.
Laba arimood oo wanaagsan oo ku saabsan kuraasta duugista: way ka jaban yihiin (ka fikir $ 3,500, maaha $ 7,000), way fiicnaanayaan, waxayna bilaabayaan inay helaan naqshad u eg inay dhab ahaan ku habboon tahay qurxinta gurigaaga adigoon kaa dhigin inaad u ekaato wadarta jerkoff.
(Haa, waan ogahay inay taasi tahay seddex, laakiin Corona wuxuu yeeshay saameyn waarta. Ii codso.)
Si taxadar leh u aqri qaybtaas ugu dambeysa. “Bilaabista” si aad uhesho qaabeyn “u eg” “laga yaabo” runti kama dhigeyso inaad u ekaato jerkoff. Si kale haddii loo dhigo: weli ma joogin weli. Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan qaabeynta ayaa fashilmay: waxay kaa badbaadin doontaa kumanaan.
4: TV-yada 4K iyo 8K
4K sida muuqata waa tikniyoolajiyad cajaa’ib leh, waxaanan rajaynayaa inaan iibsado markii ay ka kooban tahay waxyaabaha aan ka helo satalaytkayga, Netflix, Youtube, iTunes, iyo ilo kale oo runtii si isdaba joog ah u taageera.
Waxaan qaadan doonaa 5
(Oo markaan gurigeyga ku sii qulquli karo anigoon soo dagsan habeen ka hor.)
Laakiin 8K xitaa way ka fiican tahay 4K. Labba jeer way fiicantahay, sidaad ogtahay inaad si gaar ah ugu fiicantahay xisaabta. (Xaqiiqdii 4X way kafiican tahay, hadaad si qurux badan xisaabta uga muuqato.)
Aniguna waxaan go aansaday inaan uhayo TV-ga 98 ″ 8K ee aan ku arkay qolka Samsung ee gargantuan CES. Qiimuhu waa $ 400,000, laakiin anigu kama walwalayo taas, maxaa yeelay oligarchs-ka Ruushka iyo VC ee ay taageerayaan Silicon Valley Series B ee bilaabaya ayaa iibsan doona lacag ku filan oo lagu maalgeliyo horumarin wax soo saar oo dheeri ah taasoo hoos u dhigi doonta qiimaha dhowr amar oo baaxad weyn shanta sano ee soo socota.
Waqtigaas, maaddada 4K waxay u badan tahay inay ahaato ugu yaraan xoogaa qayb ahaan marmar caadi ah, waxaanan iibsan karaa doodad kale si aan u joojiyo TV-ga si kor loogu qaado 8K iyada oo "aan lahayn lumis tayo leh."
5: Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sida dhabta wax u qabta
Sannadkii hore CES waxay soo bandhigtay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Iyo drones. Iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo dheeri ah. Sannadkan, wax badan baa ka duwanaa.
Diyaarad aan duuliye lahayn oo CES ah Midkani waxba ma sameeyo (duullimaad mooyee)
Weli waxaa jiray diyaarado, iyo drones, iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Laakiin drones-kaani runti wax bay qabtaan. Ugu yaraan fiidiyowyo si taxaddar leh loo duubay oo wax yar uun-retouched ka soo-saarayaasha eex la'aan.
Waxaan arkay diyaarado drones ah oo sameeya filim heer sare ah oo filim ah. Drones tartankaas. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aad toogan karto. Diyaarado dagaal. Droneska ilaalada xuduudaha. Drones-ka wax lagu beero ee buufiya sunta cayayaanka laakiin siyaabo beyco ahaan loo ogol yahay oo keliya. Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee ka qaada meydadka xubnaha cusub ee la soo goostay isbitaalada halka looga baahdo. Iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee keena bustaha marka aad gaajooto, caajis tahay, oo aadan danaynin cuntada caafimaadka leh.
Dheeraad ah, dabcan, qori dili-dil.
Xaqiiqdu waa wax aamminaad leh oo aan caadi ahayn - tusaale ahaan: shaqadaada inteeda badan. Xaqiiqda sii kordhaysa waxay u muuqataa wax badan oo… la wanaajiyey, xaqiiqda dalwaddii ayaa xitaa ka sii wanaagsan, noocyada dhabta ah ee isku dhafan ayaa isugu jira kuwa ugu fiican labada adduun.
Fiiri, Ma, waan duulayaa ...
Dhamaan seddexduba waxay ahaayeen kuwo caddeyn u ah CES 2017, oo leh dhageysiyo rakhiis ah oo raqiis ah oo kuu oggolaanaya inaad taleefankaaga ku haysatid dhowr inji oo wejigaaga ah isla markaana aad u fiirsatid sida pixelated ee shaashadda ugu sarreysa ee qeexitaanka-qeexitaanka ka sarreeya ay dhab ahaan ka badan tahay shirkadaha VR ee sameyn doona dhab badbaada ilaa show sanadka soo socda.
Laakiin shaqaalaha Zeiss waxay ku dhawaadeen inay xaqiijiyaan in Apple-ka iPhone 8 uu sameyn doono xaqiiqo la kordhiyay.
7: Wireless wax walba
Dhammaan fiilooyinka, tikniyoolajiyadda macaamiisha waxay umuuqdaan inay go'aamiyeen, waa inay dhintaan. Tani waa war aniga igu soo dhaweynaya, maadaama milkiilaha hanka leh ee PlayStation VR loo dhigay fiilooyin ka badan Apollo 13.
Koonku wax buu siiyaa, caalamkuna wuu qaataa, hase yeeshe, haddana bateriyadu aad iyo aad ayey muhiim u yihiin.
8: Smart wax walbo
Sirdoonka macmalka ah waa "dabiici ah" oo cusub, qof ayaa dhawaan sheegay, oo si cad dhammaan suuqleyda qalabka waxay farriinta heleen isla waqtigaas, pre-CES
Wax walba waa caqli, wax walbana waa la kobciyaa AI, wax walbana had iyo jeer waa baranayaan waqtiga oo dhan sida ugu wanaagsan ee loogu adeego iyadoo la adeegsanayo horumarin yar oo koror ah oo ku saleysan adeegsiga. Sharci cusub ayaa la ansixiyay Koongareeska, mana jiraan wax soo saar cusub - burushka timaha, musqulaha, iyo koobabka oo ay ku jiraan - waxaa laga yaabaa in la bilaabo iyada oo aan la helin shay dareemayaal, raadiyeyaal, kaamirooyin, jibbaarro, iyo, dabcan, barnaamijka ku xiran ee dhammaantood xakameeya.
9: Isticmaalaha wada sheekaysiga isticmaalaha
Sida aan wada ogsoonahay, taleefanka oo aad la soo baxdo, naftaada xaqiijiso, helitaanka iyo furitaanka barnaamij, iyo eegitaanka shaashaddaada waa mid aad iyo aad u 2016.
Gaarigeyga iyo Google waa, sida, burooyinkeeda ugu fiican
In 2017, waxaan kaliya la hadalnaa tiknoolajiyadeena.
Waana, dabcan, dib ayey noola hadlaysaa.
Dabcan, Amazon Echo wuu ka weyn yahay sannad, dabcan, laakiin 2017 waa sannadka uu qarxi doono, iyadoo ay la socdaan tirada "xirfadaha," ama barnaamijyada yaryar ee ay maamusho, iyadoo labanlaabmaya kaliya hal usbuuc ee CES. Iyadoo Cortana, Viv, Kaaliyaha Google, iyo haa, ayeeyo Siri, waxaan helnay mustaqbal muhiim ah oo ku saabsan teknolojiyada wadahadalka oo madax noo ah.
10: waaqica la kordhiyay ee dhegta
Tusida indhaha waxyaabaha aan runta ahayn waa hal shay. Laakiin ma aha wax lagu farxo in laga tago, dhagaha ayaa sameeyay guddi hawleed siyaasadeed si loo hubiyo in xuquuqdooda la ixtiraamo.
Marka xaqiiqda loo kordhiyay dhegtu waxay ahayd wax ka jira CES, oo si saraaxad leh, waa wax weyn.
Soo-saareyaashu waxay soo saaraan aaladaha dhegaha-gudaha ee AirPod-ka oo aad uga qabow marka loo eego aabbaha qalabka gargaarka maqalka, oo waxay kuu oggolaan doonaan inaad si xul ah u jaangoyso codadka dhibta leh - sida codka xaaskaaga - banaanka. Ku dar kuwaan cinwaannada madax-bannaan ee dhabta ah ee la kordhiyay, waxaadna awoodi doontaa inaad dhaqso u xakameyso miirayaasha dareenka ee kuu oggolaanaya inaad runta ku xirto sida saxda ah ee aad rabto inay noqoto.
Si kale haddii loo dhigo, sida boggaaga dhabta ah ee 'Facebook', laakiin xitaa ka sii fiican.
Laakiin… Wali waan jeclahay farsamada
Waa wax lagu farxo in lagu kaftamo aaladaha cusub ee CES. Laakiin si dhab ah hal daqiiqad ah, waxaa ka sii raaxeysi badan oo kaliya inaad dhulka lugeeysid oo aad la yaabtid aaladaha kaladuwan ee dadku riyadiisa ku taamayaan.
Iyo in la ogaado in si uun, si uun, qaar ka mid ah kuwan ay u noqon doonaan kuwa guud mustaqbalka aan fogayn.
Tags: 20174k telefishanka4k tv-yada8k telefishanka8k tv-yadaaiarmarkaas2017macaamiishadronesqalabkalas vegaskuraasta massaemrfarsamada xayawaankaxayawaankaguryaha caqliga lehguryaha casriga ahTechnologycodkavrwireless
Buufinnada, Xabkaha Xumbada, iyo Martech: Midkee Aan Lahayn?
Jan 14, 2017 saacadu markay ahayd 12:46 PM
Haye john waxay ahayd maqaal wargelin ah.
Jan 14, 2017 saacadu markay ahayd 5:10 PM
Mahadsanid! Waxaan rajeynayaa inay sidoo kale xiiso laheyd 🙂
Jan 15, 2017 saacadu markay ahayd 10:51 PM
Teknoolojiyadda ayaa adduunka isbeddel ku samaynaysa. Rumeysta inaan rajeyneyno inaan la kulanno shaqaaleyaal dhab ah. Mid ka mid ah tusaalaha ugu fiican ayaa ah Google, sida algorithm-kooda raadinta micnahoodu uga dhigayo weydiinta raadintu mid khusaysa. Sidee barashada mashiinku door muhiim ah uga ciyaaraa fahamka sida loola dhaqmayo dadka iyo sameynta go'aanada ku saleysan. Waxaan wareysi la yeeshay khabiir ku takhasusay raadinta Semantic David Amerland, Marka la daabaco waan kula soo socodsiin doonaa. Wareysiga David wuxuu si cad u sharaxayaa sida raadintu u socoto.
Jan 16, 2017 at 11: 34 AM
Waxaan rajeyneynaa inaan maqlo fikradahaaga!